Goormee xilka laga qaadi doonaa wasiir Axmed Ciise Cawad ? | allsaaxo online
Goormee xilka laga qaadi doonaa wasiir Axmed Ciise Cawad ?
Axmed Ciise Cawad oo ah Soomaali-American ayaa maamulaya wasaarada arrimaha dibbada ee Soomaliya 11kii bilood ee lasoo dhaafay. Waa wasiirkii ugu qaladka badnaa ee wasaaradaas qabta inta la xasuusta.
Intii uu wasiir Cawad joogay wasaarada arrimaha dibbada waxaa Soomaaliya usoo hoyday magac xumo badan, waxaana uu dalka galiyay jahwareer siyaasadeed oo arrimaha dibbada ah ,walina waa uu sii wadaa.
Cawad oo dadka yaqaana ay sheegeen inuu yahay nin aaney u bilaawneyn siyaasada arrimaha dibbada ayaa kursiga ku yimmid inuu saaxiib la yahay Fahad Yasin iyo inuu booskaan reerkiisu lahaa.
Cawad ayaa ku fashilmay maareynta mowqifkii ay Soomaliy ka qaadatay Khaliifkii Khaliijka, wuxuu ku fashilmay sida loola macaamilaayo Emirate-ka oo dano badan kaleh Soomaaliya, wuxuu eeganaayay safaarad hantidii lagu dhacay Xamar, wuxuu waraaq aan laga fiirsan kula saftay Sacuudiga markii ay is qabteen Sacuudiga iyo Canada, wuxuu lumiyay xiriirkii Soomaaliya iyo Jabuuti, wuxuu ku ceeboobay labo waraaqadood oo uu Sacuudiga kula saftay kuwaas oo loo heysto kiiska dilka wariye Jamal, waxaana uu lumiyay xiriirkii wacnaa ee Soomaaliya iyo Turkiga.
Dhamaan intaas oo qalad iyo jahwareer ah waxey dhaceen intii uu xafiiska joogay wasiir Axmed Ciise Cawad oo ah 11bilood. Bal qiyaas waxa dhici kara hadii uu sii joogo xafiiska, madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre waxaa hortaala iney badalaan wasiir Cawad.
“Cawad wuxuu Soomaaliya dhigi doonaa meel halis ah hadii aan deg deg shaqada looga eryin, hadii kursiga lagu sii hayo wuxuu keeni doonaa fashil iyo ceeb intaan ka badan ayuu yiri Prof Jamal Cali oo culuumada siyaasada ka bartay jaamacada Oxford.
Waxaa jira warar sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu kala hadlay dad ku dhow dhow isku dhex yaaca ka jira wasaaarada arrimaha dibbada iyo sida ay macquul ku tahay in Cawad uu booskaas sii joogo.
Waxaa socota saan saan uu ku baxaayo Axmed Ciise Cawad, marka la eego dareenka madaxda sare iyo talo soo jeedinta shacabka.